Iindaba -Ingqolowa yesoya: Into omele uyazi
Iintsholongwane zokungunda zesoya: Into ekufuneka uyazi
Ndigqibe kwelokuba ndizame ukungunda ngeembotyi zesoya okokuqala kulo nyaka. Ndiyazi njani ukuba yeyiphi i-fungicide yokuzama, kwaye kufuneka ndiyisebenzise nini? Ndizokwazi njani ukuba iyanceda?
Iphaneli yomcebisi wezityalo eqinisekisiweyo yase-Indiana ephendula lo mbuzo ibandakanya iBetsy Bower, iCeres Solutions, iLafayette; UJamie Bultemeier, ugqirha wezolimo, i-A & L yeLebhu enkulu yamaLwandle, eFort Wayne; kunye noAndy Like, umfama kunye neCCA, eVincennes.
Bower: Jonga ukukhetha imveliso yokubulala ukungunda ngeendlela ezahlukeneyo eziya kubandakanya ubuncinci i-triazole kunye ne-strobiluron. Ezinye zibandakanya into entsha esebenzayo ye-SDHI. Khetha enye enemisebenzi elungileyo kwindawo yegqabi lefriji.
Kukho amaxesha amathathu kwinqanaba leembotyi zesoya abantu abaninzi abaxoxa ngalo. Ixesha ngalinye linezinto ezilungileyo nezingalunganga. Ukuba bendimtsha ekusebenziseni i-fungicide yesoya, bendiya kujolisa kwinqanaba le-R3, xa iipods ziqala nje ukwenza. Kweli nqanaba, ufumana ukugubungela okuhle kumagqabi aphezulu.
Isicelo se-R4 sihle kakhulu emva komdlalo kodwa sinokusebenza ngempumelelo ukuba sinesifo esiphantsi sonyaka. Kumsebenzisi wokuqala wokubulala ukungunda, ndicinga ukuba i-R2, intyatyambo egcweleyo, kusekutsha kakhulu ukuba ungafaka isibulali sokubulala ukungunda.
Ekuphela kwendlela yokwazi ukuba isibulali sokubulala ukungunda siphucula isivuno kukubandakanya isiqwenga sokutshekisha ngaphandle kwesicelo ebaleni. Sukusebenzisa imiqolo yokuphela yomtya wakho wokutshekisha, kwaye uqiniseke ukuba wenza ububanzi bomtya wokutshekisha ubuncinci ubungakanani bentloko yokudibanisa okanye umjikelo wokudibanisa.
Xa ukhetha i-fungicides, jolisa kwiimveliso ezibonelela ngolawulo lwezifo okhe waqubisana nazo kule minyaka idlulileyo xa ujonga amasimi akho ngaphambi nangexesha lokuzaliswa kweenkozo. Ukuba olo lwazi alufumaneki, jonga imveliso ebanzi ebonelela ngaphezulu kwendlela enye yokusebenza.
I-Bultemeier: Uphando lubonisa ukuba eyona nzuzo inkulu kutyalo-mali kwisicelo esinye seziphumo zokubulala ukungunda ukusuka kwi-R2 kade ukuya kwisicelo sokuqala se-R3. Qalisa ukukhangela amasimi eembotyi zesoya ubuncinci veki nganye ukuqala ukudubula. Gxila kwisifo nakwingcinezelo yezinambuzane kunye nenqanaba lokukhula ukuqinisekisa ixesha elifanelekileyo lokufaka isicelo sokubulala ukungunda. I-R3 iqatshelwe xa kukho i-pod ye-3/16-intshi kwenye yezi ndawo zine ziphezulu. Ukuba kuvela izifo ezinjengokubumba okumhlophe okanye indawo yegqabi lefriji, kusenokufuneka unyange ngaphambi kwe-R3. Ukuba unyango lwenzeka phambi kwe-R3, isicelo sesibini sinokufuneka kamva xa kuzaliswa iinkozo. Ukuba ubona iintwala zembotyi zesoya, iisinambuzane, ooqongqothwane begqabi leembotyi okanye ooqongqothwane baseJapan, kungacetyiswa ukongeza isibulali zinambuzane.
Qiniseka ukuba ushiya itsheki enganyangekiyo ukuze isivuno sinokuthelekiswa.
Qhubeka ujonge intsimi emva kwesicelo, ugxile kukwahluka koxinzelelo lwezifo phakathi kwezahlulo ezinyangiweyo nezinganyangekiyo. Ukuze i-fungicides ibonelele ngokwanda kwesivuno, kufuneka kubekho isifo ukuze kulawulwe i-fungicide. Thelekisa isivuno ecaleni kwelinye phakathi kokuphathwa nokunganyangwa ngaphezulu kwendawo enye yentsimi.
Njengaye: Ngokwesiqhelo, isicelo sokubulala ukungunda kwinqanaba lokukhula le-R3 sinika ezona ziphumo zibalaseleyo zesivuno. Ukwazi eyona fungicide uyisebenzisayo ngaphambi kokuqala kwesifo kunokuba nzima. Kumava am, i-fungicides eneendlela ezimbini zokwenza kunye nenqanaba eliphezulu kwindawo yamagqabi e-frogeye isebenze kakuhle. Kuba kungunyaka wakho wokuqala ngundoya weembotyi zesoya, ndiza kushiya iziqwengana zokujonga okanye ukwahlula amasimi ukumisela ukusebenza kweemveliso.
Ixesha Post: Jun-15-2021